अटो बजार घाटाको व्यापार - Jhilko
अटो बजार घाटाको व्यापार
सिंहदरबारको अगाडि बग्गीखानाको बगलमा चारदिने भव्य क्याम्प जारी छ । त्यहाँ एसयुभी मेगर जीपको क्षमता परीक्षणका नाममा सवारी प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यसकै सय मिटर पश्चिम भृकुटी मण्डपमा करोडौं खर्चेर ‘नाडा अटो सो’का नाममा भएको ६ दिने प्रदर्शनी सकिएको छ । यी दुबै स्थानमा ‘प्रतिदर्श’ मार्फत् आगन्तुकको ध्यानाकृष्ट गराइयो, गराइरहेका छन् । यहाँ सवारी शौखिनहरुको भीड लागेको देखियो । सरकारले भन्ने गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ यही हो कि भन्ने गरी आमसञ्चारका माध्यमले समाचार पस्किए ।
भिडियो पनि हुर्नुहोस्
अहिले संसारमा पाइने सबै प्रकार र ब्राण्डका सवारी साधन नेपालमा पाइन्छ । यस्तो प्रदर्शनीमा त नयाँ नाममा उत्पादन भएको नयाँ सवारी साधनको प्रबद्र्धन गरिन्छ । दुई तिहाई बहुमतका सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यी प्रदर्शनका मुख्य आकर्षण हुन् । उनले देशको अर्थतन्त्रबारे यस्ता स्थानमा पनि सुनाउँछन् तर उनले त्यहाँ बस्दा हरेक गाडीमार्फत् नेपाली पुँजी पलायन भएको बिर्सन्छन् । नाडा अटो शो उद्घाटन गर्दा उनले गत वर्ष अर्थतन्त्र करिब ६८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा भएको सम्झिनुपर्ने हो । उनीजस्तो व्यक्तिले मुलुक भित्रिएको भन्दा ६८ अर्ब रुपैयाँ बढी विदेशी मुद्रा बाहिरियो भन्ने थाहा पाउनुपर्ने हो । स्मरणरहोस्, गत वर्ष मुलुक बा¥है महिना अर्थतन्त्र घाटामा थियो ।
गत वर्षको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा रहेको थियो । शोधनान्तर घाटा फराकिलो बन्दै जानुको प्रमुख कारण बढ्दो व्यापार हो । देशको चालु खाता पनि घाटामा रह्यो । मुलुकको चालु खाता घाटा बढीमा सो राष्ट्रको जीडीपीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । अनिमात्र सामान्य रूपमा हेरिन्छ । तर गत वर्षका अधिकांश महिनामा यस्तो सूचक पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रह्यो । गत बैशाखमा चालु खाता घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ७ प्रतिशत थियो । यो असुरक्षित अवस्था हो । आर्थिक वर्ष ०७५ / ७६ मा कूल वस्तु आयात रु. १४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । निर्यात रु. ९७ अर्ब ११ करोडको मात्र छ । यस्तो फराकिलो अन्तर के कारणले भयो ? यो विषयमा गम्भीर हुने कहिले ? अर्थमन्त्रीले आकर्षक ‘प्रतिदर्श’का अगाडि गएर विलासी वस्तुको आयात प्रबद्र्धन गरेको देख्दा लाग्छ, कोमामा गएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ब्युँतन मुस्किल छ ।
नेपालको व्यापार घाटा सबैभन्दा बढी भारतसँग छ । कूल व्यापारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग छ । त्यहाँबाट आयात हुने वस्तुले देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको हो । नेपालको सामान निर्यातमा अप्ठ्यारो पार्ने तर भारतका सामग्री जबर्जस्ती पठाउने काम भइरहेको छ । आकर्षक स्कीम ल्याएर व्यापारिक ट्रयापमा नेपाललाई पारिरहेको छ । उसको अर्थतन्त्रमा आएको खराबीलाई बचाउने नियतका साथ नेपाललाई बजारको रुपमा छनोट गरिएको माथि उल्लेखित प्रदर्शनीले पनि प्रष्ट पारेको छ ।
भारतको अर्थतन्त्र ओरालो
टोलटोलमा शोरुम राखेर नेपाली बजारमा जबर्जस्ती अटोमोबाइल बिक्री किन हुँदैछ ? यही क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा किन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा गम्भीर हुने हो भने भारतको पछिल्लो अर्थतन्त्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०१९ / २० को पहिलो त्रैमासिक (अप्रिल–जुन)मा त्यहाँको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को बृद्धि दरमा गिरावट आएर पाँच प्रतिशतमा कायम भएको छ । यो बृद्धिदर ७ वर्ष यताकै न्यून हो । यस्तो बृद्धिदर सन् २०१३ को जनवरी र मार्च महिनामा ४.३ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
पछिल्लो तीन महिनामा उत्पादन क्षेत्रको गतिविधिमा आएको गिरावटका कारण जीडीपी बृद्धिमा धेरै असर परेको हो । यो क्षेत्रको बृद्धिदर घटेर ०.६ प्रतिशत रहेको छ । जनवरी–मार्चमा बृद्धिर ३.१ प्रतिशत थियो । पछिल्ला पाँच त्रैमासिकमा उसको अर्थतन्त्र आरालो लागेको छ । त्यसले गर्दा नेपालका नवअभिजात वर्गमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गरेर आर्थिक क्षेत्र बचाउन कोसिस गरेको छ । त्यसकै प्रतिबिम्बस्वरुप नेपालमा जबर्जस्त रुपमा भारतीय उत्पादन लादिएको हो भन्ने दुई मत हुँदैन ।
बजार बचाउन नेपाल तारो
भारतको कृषि, माइनिङ, उत्पादन र विद्युत् क्षेत्रको विकासमा त डरलाग्दो कमी आएको केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको आँकडाले देखाएको छ । विश्वमा आफ्ना उत्पादनको बजार गुमाउँदै गएको भारतले नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रमा हमला गरेको देखिन्छ । प्रत्येक चोकचोमा विलासी सामग्रीको प्रदर्शन गरेर लोभ्याउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् कर्जा प्रवाह गराएर मध्यम वर्गीय नेपालीलाई ऋणको पासोमा पारेको देखिन्छ । त्यही भुलभुलैयामा यहाँका बैंक परेको देखिन्छ । सस्तोमा ब्याज दिने प्रतिस्पर्धा गरेर अनुत्पादक चीज, भारतको सङ्कटलाई समाधान दिने गरी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाली जनतालाई विलासी सामग्री भिराउन कुन बैंकले कम ब्याजमा ऋण दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । यसमा तत्काल लगाम नलगाउने हो भने नेपालमा धेरै ठूलो आर्थिक दुर्घटना पर्न सक्छ ।
उत्पादन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतको अटो मोबाइल उद्योग विश्वको सातौं सबभन्दा ठूलो अटोमोबाइल हो । भारत एसियाको चौथो सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल निर्यातक देश हो । तर, विद्यमान अवस्थामा पहिलो त्रैमासिकमा कार बिक्रीमा १८.४ प्रतिशत कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा सबै श्रेणीमा गाडी बिक्री १२.३५ प्रतिशतबाट घटेर ६० लाख ८५ हजार ४०५ इकाइ भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
मारुति पनि फ्लप
भारतको सबैभन्दा बढी प्यासेञ्जर कार निर्माता कम्पनी मारुति सुजुकी इण्डियाको बिक्री गत जुन महिनामा १७ प्रतिशत कमी आएर गत वर्षको तुलनामा १ लाख ३४ हजार ३६ युनिटबाट घटेर १ लाख ११ हजार १४ इकाइमा आएको थियो । टाटाको सबभन्दा सानो र सस्तो कार नानोका लागि अहिलेसम्म २०१९ अभिसाप सावित भएको छ । यो अवधिमा टाटा केवल एउटा मात्र नानो कार बेच्न सफल भएको छ ।
अल्टो, वैगन आर आदिको यस वर्ष बिक्रीमा ३६ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यस्तै सेडान सेग्मेन्टको कार स्वीफ्ट, डिजायर आदिको बिक्रीमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १२ प्रतिशतले कमी आएको छ । स्कुटरको बिक्रीमा २६, मोटर साइकलको बिक्रीमा १२ प्रतिशतमा कमी आएको छ । गाडीहरुको बिक्री पछिल्लो १८ वर्षमा सबैभन्दा तल ओर्लेको छ । हजारौं करोडको लागतको लाखौं गाडी गोदाम र कारखानामा सडिरहेको छ । करिब ५२ हजार करोड मूल्य बरबरको ३५ लाख गाडी देशभरका शोरुममा रहेर सडिरहेको छ । औसतमा दुई शोरुम हप्तामा बन्द भइरहेको छ ।
मारुति सुजुकीले फेब्रुअरीमा नै उत्पादनमा ८.३ प्रतिशत कटौती गरेको थियो । अल्टो, ब्रेजा, स्वीफ्ट डिजायरको उत्पादनमा यस वर्ष ८.४ प्रतिशतको कटौती भएको छ । जसका कारण उत्पादन औसत क्षमतामा ५० प्रतिशत कमी आयो । लामो समयसँग छाइरहेको अटो सेक्टरको मन्दीका कारण अटो पार्ट्स उद्योगमा कार्यरत ५० लाख श्रमिकमध्ये लगभग १० लाखको रोजगारी खतरामा छ । सबैभन्दा धेरै अस्थायी मजदुर यसमा पर्ने देखिन्छ । देशभरमा १५ हजार डिलरद्वारा सञ्चालित २६ हजार शोरुममा करिब २५ लाख प्रत्यक्ष र यतिकै सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी छ ।
शोरुम नै बन्द
पछिल्लो १८ महिनामा २७१ शहरबाट २८६ शोरुम बिक्री नभएका कारण बन्द भएको छ । बन्द भइरहेका शोरुमका कारण पछिल्ला केही महिनामा खुद्रा बजारमा काम गरिरहेका करिब दुई लाखले रोजगारीबाट हात धुनु परेको छ । त्यसो त विश्वको सबैभन्दा ज्यादा उत्पादन र खपत गर्ने देश चीनमा पछिल्लो एक वर्ष यता लगातार बिक्रीमा कमी आइरहेको छ । उत्पादनमा कटौती भइरहेको छ । उत्तर अमेरिकी देशहरुमा अटो मोबाइलको बिक्रीमा २०२२ सम्म ३० प्रतिशत कमीको सम्भावना छ ।
उत्पादन क्षेत्रको गतिविधिमा आएको भीषण गिरावटका कारण जीडीपी बृद्धिमा धेरै असर परेको भारतमा लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् । मुख्यतः अटोमोबाइल क्षेत्रको बिक्रीमा आएको कमीले उसको उत्पादन क्षेत्रको बृद्धिदर घटेर ०.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस्तो खतरनाक अवस्थामा सुधार गर्न भारतका कम्पनीले नेपालको बजारलाई उपयुक्त ठानेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि प्रत्येक चोकचोकमा अटोमोबाइलको शोरुम र गल्लीगल्लीमा त्यसका पाट्र्सका पसल खुलेका छन् । त्यतिमात्र नभएर प्रत्येक चाडपर्वमा प्रदर्शनी गर्ने र सस्तो ब्याजमा ऋण दिने लोभ देखाएर सर्वसाधारणलाई विलासीका सामग्री भिडाउने काम भइरहेको छ ।
विगतमा भारतले आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न अटोमोबाइल आयातमा रोक लगाएको थियो । त्यसैगरी श्रीलंकाले पनि सवारी साधन आयातमा रोक लगाएको थियो । तर, विलासी वस्तुमा हाम्रा अर्थमन्त्रीजस्ता अन्य निर्णयकर्ताकै मोह रहेको र व्यवसायी हावी भएकाले अटोमोइबाइलको आयातमा अंकुश लगाउन सकिएको छैन । नेपालमा उत्पादन नहुने विलासी वस्तुमा रोक लगाउन खुला बजार नीति र मित्र राष्ट्रहरूको स्वार्थ बाधक भएको स्पष्ट देखिन्छ । यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको मुटुमा प्रहार गरिरहेको छ । भारतीय अटो मोबाइलको नेपाललाई बजार उपनिवेश बनाइएको छ । यो बजार उपनिवेशले आएदिन नेपालको विकास र समृद्धिमाथि चिसो पानी खन्याउने निश्चित छ । यस्तै भइरहे ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा ‘सोम शर्माको सातुको सपना’ को कथामा चरितार्थ हुनेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
रामचन्द्र पौडेलको धरमर
धरान उप–महानगरमा टिकटको लागि मेयरको ताँतीः ताप्के नताती बिँड तात्यो
पक्राउ पर्ने अभियुक्त साविकको साटाखानी गाविस–७ र हालको लेकबेँसी नगरपालिका–९ साँझेचौर...
कोरोनाबाट विश्वभर २ लाख ६५ हजारको मृत्यु, अमेरिकामा एकै...
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयानुसार बिहीबार मध्याह्नसम्ममा विश्वभर...
राजा वीरेन्द्र वंशनासको योजना बनाउनेले केही नपाएपछिको छटपटी...
राजा वीरेन्द्र ,रानी एश्वर्यलगायत राजपरिवारका आठजना सदस्यलाई एकै ठाउँमा हत्या गर्ने...